Cajiibka Badeecada Dhallaanka
Custus Citrus Seddexda Weelasha Cagaarka qudaarta Cilmi-baaris Caafimaad American Seers
Naxariista Belgian Endives
Si tartiib ah u karsiiya dareenka Belgian ee waxoogaa yar oo ah subaga iyo casiirka liinta waxay bedeshaa kuwan kale oo qadhaadh ah oo qadhaadh ah oo caleemo qallafsan, qallafsan, xirmooyin badan oo macquul ah. Waa alaabta jikada ee ugu fiican. Dammaanadahan waa kuwo la mid ah digaag la dubay ama kalluun la karkariyey.
Ogsoonow in ay jiraan laba ikhtiyaar oo ka hooseeya: Cunto kariska ah gebi ahaanba daaqada ama kor u kaca kariyaha iyo ku dheji foornada kulul. Xulashada labaad ayaa ah mid aad u sareysa tan iyo dhammaadka darisku waxay u muuqdaan kuwo si siman u liqaya meesha ugu horeysa, mana u baahnid inay ugu dambeyntii u dhaqaaqaan oo ay si fiican u daboolaan dhamaadka.
2 qaado oo sabdo ah
10 ilaa 12
1 qaado qaado
1/4 qaado oo cusbo ah oo milix ah
1/3 koob oo biyo ah (waxaad xor u tahay inaad isticmaasho digaag ama khamri cad, haddii aad jeceshahay)
Ikhtiyaari: 1 qaado oo sonkor ah
Ku rid digsi weyn oo culus, saliida, ama dheriga kuleyl dhexdhexaad ah. Gaaddi kasta oo aad doorato waa inuu leeyahay dabool adag. Marka digsiga kulul yahay, ku dar subagga.
Inkastoo subaggu uu dhalaalayo, dabka xoqo kana qaado shey kasta oo la jeexay oo ka soo jeeda dhamaadka dariiqa iyo wixii caleemo dibedeed oo qallalan. Marka subagga la dhalaaliyo, ku dhaji dusha sare ee lakabka. U daadi liin iyo milix. Ku shub biyo hoos mareeyaha digsiga (ma rabtid inaad dhaqdo cusbo aad ku rusheeyeen kaliya). Haddii aad rabto inaad gooyo qadhaadh ee saxanka ugu dambeeya xitaa marka loo eego farriinta ayaa keligaa samayn doonta, ku rusheeyna sonkorta sonkorta.
Dabool digsiga. Waxaad rabtaa dabool wanaagsan oo adag oo dabool leh. Haddii haraamku ka baxo, ku dhaji gabal qurub oo ka sameysan digsiga ka dibna ku rid daboolka. Ama, jar jartey warqad xajin si toos ah ugu dheji dusha sare kadibna dabool daboolka (adigoo xitaa si xor ah u sameeya xitaa dabool adag);
Habka 1 : Yaree kuleylka hooseeya. U ogolow in cunnooyinka la kariyo, aan waxba tareyn, illaa ay aad ujiraan, ilaa 30 daqiiqo.
Habka 2aad : Haddii kariyahaagu aanuu kicin ama aad u baahato meesha kuleylka ah ee cuntada inteeda kale, waxaad ku dari kartaa digsiga foornada 375F halkan oo u ogolow inay halkaa ku kariyaan 30 illaa 40 daqiiqadood halkii kariyaha. Habkani wuxuu sidoo kale u badan yahay inuu keeno damqasho dheellitiran oo caan ah.
Marka ugu dambeyntii aad ujirto, ka saar daboolka (iyo waraaqda ama warqadda xashiishka ah, haddii aad isticmaashay), digsiga ku sii daa shooladda haddii uu ku jiray foornada, iyo kariyo kuleyl dhexdhexaad ah illaa wax dareere ah oo ka soo baxaya qiiqa marxaladaha ugu dambeyntii waxay bilaabaan caleemo, haddii loo baahdo. U diyaarso darfaha oo aad karisid ilaa inta la wada jarayo. Ogow in haddii aad sonkorta ku dartey Tallaabada 2, waxaad u baahan doontaa inaad si taxadar leh u daawato marxaladahan, maaddaama sonkorta lagu daro ay si dhaqso ah ugaarsadeyn doonto. Ku darso kulul ama diirran.
Fatuurad la ruxay 4 g
Kolestarool 15 mg
Carbohydrateska 44 g
Fiber diirran 40 g
Sauteed Fava Greens Recipe
Bariisiga Salseed Okra
Salad Macaroni Salad Recipe
Meatloaf Chili Recipe
Hilibka doofaarka leh la kariyo iyo Suugada Avgolemono - Hoirino me Sesi
Feta Cheese iyo Dufanka Dufanka Casaan leh
Cajiibka lo'da ah
50 + Fikrado Macmacaan ah oo Mahad leh
Creamy Garden Potato Salad Iyadoo Eggs
Classic Tafelspitz - Qaranka Qaranka ee Austria
Quraac Maraykan ah
Homemade Brown Sonkor Daboolay Suuban sahlan
Sida loo sameeyo Farxad weyn
Deluxe Khudrada: Quino iyo Black Bean Burgers
Pavochón: Puerto Rican qaxwaha macmacaanka Turkey
Bariise Iskukaris - Khamiis Soomaali ah
Cunto fudud oo bilaash ah Gluten-Free Popover